Warbixin: Horumar ballaaran oo laga dareemayo deegaanka Jasiira | Najah Media Network
Bogga Hore Maqaalo Warbixin: Horumar ballaaran oo laga dareemayo deegaanka Jasiira
Warbixin: Horumar ballaaran oo laga dareemayo deegaanka Jasiira
Warbixintaan oo gaar u ah shabakadda Najahonline waxaan ku eegeynaa taariikhda, nolosha, amniga iyo horumarka laga dareemayo deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho.
Jasiira waa degaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose oo ah meel dalxiis ku fiican, deegaankan waxaa si weyn loo dagay wixii ka dambeeyay 1991-kii xiligaasi oo dalka dhan fooda uu galay, kadib markii la riday dowladdii dhexe ee Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre.
Sidoo kale wuxuu deegaanku leeyahay, marka laga soo tego dalxiiska kheyraadyo badan sida badda, beeraha & xoolaha.
Waxaa sanadihii u dambeeyey is-bedal weyn laga dareemayey Jasiira oo noqotay meel ay u damaashadaan shacabka Muqdisho, islamarkaan leh xeeb dheer oo dabaasha ku fiican.
Guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda Jasiira, Xuseen Jilacow Maxamuud oo u warramay Najahonline ayaa ka sheekeeyey horumarka haatan ka jira deegaankaasi.
”Horumarka deegaanka waa wax iska caan ah waa magaallo xeebeed yacni goobo dalxiis caan ku ah xeebaha loo dalxiis tego oo shacabku ay tegaan waa dhul baaxaad leh oo taariikh fog-leh.” ayuu yiri Xuseen Jilacow Maxamuud oo ah guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda deegaankaJasiira ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Mr Jilacow oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in amniga Jasiira uu yahay mid aad u wanaagsan oo la’isku haleyn karo, islamarkaana ay ka howl-galaan ciidamo gaar ah oo la shaqeeya maamulka uu dhowaan guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose, Mudane Ibrahim Adan Ali (Najah) u magacaabay deegaankaas, si looga shaqeeyo horumarka iyo nabadda.
Waxaa kale oo uu intaasi ku daray inay wax badan ka qabteen dhibaatadii ka jirtay wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo Jasiira oo ay ku sugnaayeen ciidamo maleeshiyaad ah, isaga oo hoosta ka xariiqay in haatan ay wadada ka howl-galaan ciidamo Booliis ah.
Jasiira ayaa sidoo kale horumar ka sameyneyso dhinacyada adeegyada aas-aasiga ah ee bulashada, sida caafimaadka iyo waxbarashada, inkastoo weli soo kabasho ay ku jiraan dadka deegaanka, sida uu innoo sheegay guddoomiye ku xigeenka maaliyadda deegaankaasi.
Waxaa sidoo kale in-dhowaanahan muran xoogan uu ka taagnaa halka ay ka tirsan tahay Jasiira, kadib markii maamulka gobolka Banaadir uu isku dayey inuu fara-geliyo howlaha ka jira deegaankaasi, sida degmo ka tirsan gobolka Banaadir.
Balse dood dheer, kadib waxaa arrintu ay ku soo idlaatay in Calanka Koonfur Galbeed laga taago xarunta maamulka ee deegaanka Jasiira, maadaama dalka uu qaatay nidaamka federaalka, waxaan haatan ka shaqeeya maamul hoostaga Koofur Galbeed Soomaaliya.
”Jasiira waa dhul la yaqaano oo Shabeelaha Hoose ka tirsan, is qab-qabsina hadda kama taagna, waxaan hoostagnaa Koonfur Galbeed Soomaaliya.” ayuu yiri guddoomiye Jilacow.
Maamulka deegaanka Jasiira oo shaqeynaya muddo saddex bilood ah ayaa waxaa heysta caqabado yar-yar oo u baahan in laga taageero, sida dhisida xarunta maamulka, maadaama ay hadda guddoomiyaha ku xigeenadiisa ku shaqeeyaan xarun kumeel gaar ah.
”Wax badan caqabado wey jiraan maamulkeenu waa mid curdun ah oo mar dhow la magacaabay, mana jiro maamul hore oo uu xafiis kala wareegay, marka waxaan u baahanahay in nala taageero, si aan u helno xafiisyo iyo xarun aan ku shaqeyno oo rasmi ah.” ayuu sii raaciyey guddoomiye ku xigeenka maaliyadda deegaanka Jasiira.
Ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay hay’adaha caalamiga ah iyo kuwa samafalka inay ka taageeraan dhinacyada waxbashada, caafimaadka iyo dib u soo celinta bilicdii ay laheyd Jasiira.
Maqaal horeJubbaland oo shaaciyey arrimaha la’isku fahmi la’yahay ee shirka Muqdisho
Maqaal XigaCiidamada dowladda oo xubno ka tirsan Al-Shabaab ku qabtay Sh/Hoose